Iningi labesifazane benenkinga izinguquko ezihlobene nokukhula nokuzama bheka omncane. Ezinye zazo beqise kule mpi, futhi ngesinye isikhathi, kwenyukela esibukweni bese bememeza bethi: "Ngizokhuluma ibukeke ingane". Yini okufanele ukwenze ukuze ungabukeki ubudala nesikhundla sakhe phambi kungayifinyeleli ukweqisa?
Ukuzama ukushintsha ukuvuthwa eseyingane
Okokuqala, ukuze sigweme isimo esinjalo iphutha, emhlabeni isidingo anesilinganiso. Futhi hhayi ukuba sizibuze: 'Kungani ngibukeka ingane, "kungcono hhayi ukuba bayakhohlwa samanje, ngiphakamisa ngomfanekiso wakhe.
Lokhu akusho kufanele babheke ncamashi yobudala bakhe. + Vele musa ukugqoka izinto intsha, akufanele zaveza esikhanya kakhulu futhi siziphathe njengabancane uma ngempela nesikhombisa.
Okokuqala, intsha, efana ubuhle, angene ngaphakathi. Yingakho kubalulekile ukubheka ngaphandle, ngendlela ozizwa ngayo, ikhumbula nakho nokuhlakanipha atholwe yabo.
Ukudala abasha, isithombe fresh wena nje kudingeka silondoloze umzimba wakho isesimweni esihle ngokomzimba: yoga, uya pool, ukuchitha isikhathi esengeziwe emoyeni opholile, ukudla ngendlela efanele.
Ungase futhi wenze ukusonga stylish, okuzokwenza uvuselele ubuso bakho futhi wonke isithombe iyonke. Ukuze wenze lokhu, udinga ukuthola onguchwepheshe omuhle.
Ukuqedela isithombe, izambatho kangcono ukuba obucayi xaxa, ezinemibala egqamile. Kungenzeka esibenyezelayo, ukuphaphatheka pink, ukuphaphatheka shades blue kanye peach. Nezingubo imibala okunjalo kuyoba okuqabulayo kakhulu, ukungayeki vulgarity.
Lapho le ntombazanyana wathi, "Mina ibukeke ingane", okusho ukuthi isinyathelo sokuqala sokuguqulwa ibe intokazi yangempela isivele wenza. Kwenzeka ukuthi amantombazane kakhulu sibhajwe usakhula. Phela, kulula kakhulu: kuwukuthi uhlala nabazali, bahlalele watch phezu kwakho, kukhona njengomntwana omncane. Akungabazeki ukuthi lesi sikhundla zikhona izinzuzo eziningi. Kungaba ezingezwakali, povrednichat like ngiseyintombazanyana, futhi abazali zithethelelwe. Kodwa sikhundla is kakhulu sebehlushwa hhayi kuphela ukuqala umndeni, kodwa futhi kulula ukuthola umngane womshado.
Futhi lapho ethi, "Mina ibukeke ingane", okusho ukuthi ekugcineni ngomumo ukuba nobuhlobo obungathi sina. Kodwa lokhu kungase njalo kusho ukuthi ukuthi kuyonqunywa ukuthatha yonke imithwalo omdala. Futhi kubalulekile! Phela, ngaphandle-ke akunakwenzeka ukuba zikhule.
Ngemva kovivinyo, zonke nezinkinga zokuphila omdala, isithombe sangaphandle intombazane ihamba ukushintsha ngokwalo. Abantu abasha ngokushesha futhi kalula uvuma ukubukeka kwayo ngaphansi izwe kwangaphakathi.
Vele ingangqubuzani ngokwakho kanye qha kwenela. Umphefumulo kufanele ngokwami. Futhi uma ingane ihlala ngaphakathi kuwe, udinga uyiphakamise kancane, accustom emisebenzini, kodwa ngezinye izikhathi sivumele futhi ekugangeni. Le ndlela yenza ukuphila lula kakhulu futhi kube mtoti. Ngaphezu kwalokho, ukungakhulumisani kobuntwana ngezinga elithile unikeza intombazane charm, unezela elikhuhluziwe ukuze isithombe sakhe esisha. Futhi kumnandi kakhulu amadoda. Nakuba abaningi babo abangavumi ngisho nokuthi ungaqondi.
Phakathi kwezinye izinto, kokushiya ngisho neconsi ingane esikhathini esizayo kuyoba lula kakhulu ukuze baxhumane nalowo izingane zabo. Futhi ekubhekaneni nokucindezeleka lula kakhulu. Phela, lo mntwana angakwazi ukukhokhela ukukhohlisa emhlabeni futhi ngikhale.
On izingubo hlangana
izimo ezinzima, lapho intombazane egqoke ngokobudala wakhe, umuntu omdala, sina ukuphila-futhi konke nomuzwa wokuthi intombazane yesikole. Futhi, naphezu kwayo yonke imizamo, ngesinye isikhathi yena athi: "Yonke imizamo ziyize, namanje ibukeke izinyane."
Lokhu kwenzeka ngenxa yezingane izici zobuso. Ngokwesibonelo, uma round ubuso, ikhala kancane esincane sokutakula, noma inkinobho, amehlo kukhona ukubukeka enkulu futhi nabanomusa, ezungeze yonke le ibonwa njengoba izimpawu ebuntwaneni.
Ngaphezu ubuso kancane ku Imibono yabantu kungayithonya kakhulu ukukhula nebala. Ngakho, uma intombazane ulula, encane, kodwa oziphatha njengongqingili intokazi yangempela, lihlobanisa ukukhathazeka kwakhe, ngaphandle nesilalela njengoba ingane.
Lesi simo sashintsha lula kakhulu. Kwanele ukuthola umfanekiso ngaphezulu omdala ukwenza ukwakheka kwesokudla, okuyinto kunoma yiliphi icala akufanele sibe nokhahlo futhi esikhanya kakhulu, ukushintsha isitayela izinwele kumuntu njengabesifazane xaxa futhi stylish. Uma umsebenzi sisibi, ungakha ngaphezulu ngendlela kwamabhizinisi.
Kodwa ukushintsha komuntu isisa ubufazi kobukhulu kanye luhlata ibhizinisi lady sebekubeke hhayi zinkulu. Phela, ngaphezu ukuhlonipha, zonke girl ufuna ukuthola umuntu omthandayo. Futhi, njengoba lo mkhuba eside, esiqinile ibhizinisi lady kakhulu ehlaselwe yokuthi amadoda bayesaba yobuntu bazo nginenhliziyo. Noma uhlangabezana Alfonso okuqinile, lowo intombazane nje kudingeka imali. Ngakho-ke, wake wathi, "Ingabe ngibukeka ingane", akudingekile ukuba "ukubulala" yena umntwana kuze kube sekupheleni. Yena eyokusiza isevisi enhle kakhulu.
Ngakho, uma intombazane ekhononda ukuthi "ibukeke ingane," wayengasidingi ukwethuka. Udinga nje kancane siguqulwe, ngaphandle kokuphula "Mina" kwawo kwangaphakathi. Khona-ke ukuphila kuyoba ziyakhazimula ngokuchazwa imibala emisha, futhi konke kuyoba okuhluke ngokuphelele.
Ukuphathwa izindleko njengoba isiqinisekiso ukusebenza ngempumelelo ibhizinisi